Best European osimiri inweta Site Ụgbọ oloko | Save A Train
Home > Travel Europe > Best European osimiri inweta Site Ụgbọ oloko
Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Portugal, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe
Ọtụtụ osimiri ememe na-amalite na-akpata nchekasị flights, ụgbọ ala, na ferries, ma e nwere onye na mfe ụzọ. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè nwere ọtụtụ uru, ahapụ gị mmetụta nọrọ jụụ before you’ve even started your vacation. Ma ị na-achọ a na-atọ ụtọ nri na a na-ele nke oké osimiri ma ọ bụ a oyi ezinụlọ ezumike, there are plenty of beautiful European beaches accessible by trains.
ITALY: Bay nke nkịtị, Sestri Levante
Ezigbo ụgbọ okporo ígwè: Sestri Levante Station, 1.1km, a 14 min pụọ.
osimiri inweta site ụgbọ oloko na oké osimiri na mma na agba
The maa mma Italian coastal town of Sestri Levante is one of the beaches accessible by trains and has long been celebrated for its breathtaking Okirikiri na yi seaside ụlọ na ntụrụndụ, niile ọgaranya akụkọ ihe mere eme na omenala. na beachgoers – ị na chi. The obere beach aha ya bụ Baia del Silenzio, ma ọ bụ 'Bay of nkịtị' ọkọkpọhi ya moniker si jụụ, crystal-acha anụnụ anụnụ mmiri nke n'ọnụ mmiri, nakwa dị ka eke nkume formations ndị na-echebe beach si ifufe.
Iji zere ìgwè mmadụ, anyị ga-atụ aro na-eleta a akuku nke paradise n'oge September ma ọ bụ October. Nke a bụ mgbe July na August ezumike-otite mere, ụzọ ha home.
Milan ka Sestri Levante Ụgbọ oloko
La Spezia ka Sestri Levante Ụgbọ oloko
Ụgbọ oloko na Genoa Sestri Levante
Parma ka Sestri Levante Ụgbọ oloko
Osimiri steepụ ụgbọ oloko na Spain: Playa de la Llosa, Cambrils
Ezigbo ụgbọ okporo ígwè: Cambrils ụgbọ okporo ígwè, dị nnọọ a 1,2km ma ọ bụ 16 min na-eje ije site na ụgbọ okporo ígwè.
3 di iche iche na oké osimiri
N'adịghị ka ndị ọzọ a ma ama Spanish osimiri nke Ibiza na Majorca, Platja de la Llosa bụ a jụụ beach na n'ụsọ oké osimiri nke obere osimiri obodo nke Cambrils. Zuru okè maka ezinụlọ ma ọ bụ di na nwunye na-achọ a izuike ezumike. Playa de la Llosa nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na cafes nso, nakwa dị ka mesịa na loungers maka hire, ọha na eze ime ụlọ ịwụ, na n'oche nkwagharị.
The beach onwe ya nwere obere mmadụ mere coves na-amachi ebili mmiri na-tides. Jikọtara na gbachapụrụ mmiri ọkụ, a na-eme ka igwu mmiri na snọklịn nnọọ izuike.
Ezigbo ụgbọ okporo ígwè: Meia Praia ụgbọ okporo ígwè, a 6 nkeji, 500m ije.
Noua na ndị mmadụ na osimiri, nke a beach inweta site ụgbọ oloko
Odude na ama Algarve n'ụsọ oké osimiri, na Meia Praia bụ kasị na Lagos region na anyị kasị osimiri inweta site ụgbọ oloko. Tụnyere ndị ọzọ, ọzọ njem nleta-jupụta akụkụ nke Algarve, Meia Praia bụ anọ kilometa-ogologo Oasis nke ọmarịcha ọlaedo ájá na udo. E nwekwara cafes na Ogwe dotted along the coastline. The Western ihu beach bụ ubé busier ruru ya mbọhọ ka Lagos.
Meia Praia bụ Ọzọkwa a na-ewu ewu center maka mmiri sports tinyere windsurfing, egbe Farisii, na ugboelu ski. Ọbịa nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ihe na iku ngwá. N'ihi na obere adventurous, a itinye na-enye ume ọhụrụ mmiri oyi na a ụgha-ala na a lounger n'okpuru nche anwụ, bụkwa maka mgbazinye.
Ikpeazụ anyị ghota maka osimiri inweta site ụgbọ oloko, FRANCE: Beach Senix, Guethary
Ezigbo ụgbọ okporo ígwè: Gare de Guethary nnọọ 2.1km pụọ, mfe walkable ma ị nwere ike na-ngwa tagzi oké osimiri.
a Surfer na-achọ na oké osimiri
A obere, zoro ezo osimiri na anụ, emetọghị emetọ South-Western coastline nke France, Beach Senix (nwekwara-akpọ mgbe ụfọdụ Cenitz) bụ zuru okè ebe maka mbido surfers, ezinụlọ ma ọ bụ solo njem. Na obi nke French Basque Country, n'etiti Biarritz na Saint-Jean-de-Luz, Guethary bụ a maa mma ochie azu obodo.
Emi odude ke n'ebe ndịda akwụsị nke Guethary na nke ahụ bụ ya mere na ọ bụ akụkụ nke anyị na osimiri inweta site ụgbọ oloko, mmiri na ebili mmiri na Plage de Senix bụ ntakịrị nta karịa ị ga-ahụ ruo n'ụsọ oké osimiri na Biarritz, nke a maara dị ka Europe dị Farisii isi obodo. The eke mara mma ma nọrọ jụụ vibe-eme ka ọ na- zuru okè n'ebe gaa.
Lyon ruo tiketi Biarritz Train
Ị na-achọ ịzụta gbaa ụgbọ okporo ígwè gị njem osimiri inweta site ụgbọ oloko na-enweghị ntinye akwụkwọ ụgwọ? Gị Saveatrain ka nweta ndị kasị oké ọnụ udu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-european-beaches-accessible-by-trains/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / nl na / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.